Caabudwaaq oo Xareeddu Mar kale Hoortay (daawo & masawirro) – Radio Daljir
Caabudwaaq oo Xareeddu Mar kale Hoortay (daawo & masawirro)
May 19, 2017 4:19 g 1
Caabudwaaq – Degmada Caabudwaaq oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa galabta roob fiicani ka da’ay, kaasoo sidoo kalena qabtay deegaanno dhawr ah oo hoosyimaada isla degmada Caabudwaaq.
Roobkaan oo muddo cabbaar ah u da’ayey si karar ah, ayaa biyo dhigay degmada gudaheeda iyo deegaanno ku hareeraysan, roobkaasi oo ku soo beegmay xilli degmada Caabudwaaq iyo deegaanno badan iskugu jira kuwo hoosyimaada isla degmada iyo kuwa ka baxsan oo isla gobolka Galgaduud ah ay seejiyeen roobabkii ugu dambeeyey ee da’ay.
Caabudwaaq, inkasta oo ay ka da’een roobabkii xilli roobaadkaan gu’ga ugu horreeyey misna kama mid ahayn deegaannada sida fiican u roobsaday, doogsinta iyo daaqa dharageedna laga helay, waxaana roobka galabta da’ay uu kor u qaaday dareenka farxadeed ee bulshooyinka deggan degmada iyo deegaannada ku xeeran ee miyi iyo magaalaba leh oo horay u qabay walwal xagga roob yarida ah.
Degmada Caabudwaaq, waxay ka mid ahayd deegannada sida xooggan ay u sameeyeen abaarihii dabadheeraa ee ka dhacay Soomaaliya oo dhan, kuwaasi oo galaaftay noloshada dad iyo duunyo aan yarayn, waxaana ku soo barabaxay dad badan oo reer guuraa ah oo xoolihii ka dhammaadeen, kuwaasi oo kaamam barakac looga sameeyey gudaha iyo bannaanada magaalada cWaaq.
Hoos ka daawo muuqaal kooban iyo galabta iyo cWaaq. Masawiro hoos ka arag.
Kooxda Kubadda Cagta ee Bari FC waa Horyaalka Puntland (dhegayso codad kaladuwan)
Farmaajo: Sawirku waa in lagu Daydo oo Dimuquraadiyad loo Gudbo (daawo)
Maxamud yare 3 months
Masha allah illahay ayey mahadi usugnaatay allah u siyaadiyo aamin DALJIR WAA MAALINKAYGA